လျင်မြန်သော မန်းဂဘီးမျောက် - ဝီကီပီးဒီးယား
လျင်မြန်သောမန်းဂဘီးမျောက် (အင်္ဂလိပ်: agile mangabey; Cercocebus agilis) သည် ကမ္ဘာဟောင်းမျောက် ဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်ရှိ အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ၊ ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၊ ဂါဘွန်နိုင်ငံ၊ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့ရှိ စိမ့်တော များတွင် တွေ့ရသည်။
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.)။ Baltimore: Johns Hopkins University Press။ p. 153။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
↑ Hart, J. (2008). "Cercocebus agilis". The IUCN Red List of Threatened Species 2008. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T136615A4318592.en.
↑ Groves, C.P. (2005). Wilson, D.E.; Reeder, D.M., eds. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. p. 153. ISBN 0-801-88221-4. OCLC 62265494
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လျင်မြန်သော_မန်းဂဘီးမျောက်&oldid=397137" မှ ရယူရန်
၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၀:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၀:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။